Slimbook inogadzira desktop yayo renji neKymera | Linux Vakapindwa muropa
Siginecha Spanish Slimbook akatikatyamadza zvakare nekusunungurwa kutsva kwatakakwanisa kuziva kuburikidza nehukama hwemagariro. Icho chaive chisiri chinhu chinotarisirwa uye ndechekuti iyi kambani yeValencian inochengetedza kushamisika kwayo nekukanganisa kwakaringana kutishamisa isu tese sezvayakaita nhasi. Ino nguva yaakavhura ayo ekutanga desktop desktop pasi pezita Kymera. Mukati meiyi nhanho, kwechinguvana uye kunze kwekushamisika nyowani, kune maBhaibheri maviri kana mamodheru atichataura newe nezvazvino ...
Kymera inhare yekuvaka ine simba uye yakashongedzwa desktop PC kuti iwe unogona kupedzisa nekutenda kune zvimwe zvishongedzo zvaunogona kuwana mukati Slimbook webhusaiti, semuenzaniso mamaki uye mbeva dzavainadzo. Kunyanya, iwe unenge uine sarudzo mbiri sezvatakataura: Ventus uye Aqua. Mavhezheni ese ari maviri akagadzirwa uye akagadzirwa pasina kukanganwa Linux uye zvemhando yepamusoro zvigadzirwa seSlimbook vanhu vajaira, senge aruminiyamu, uye zvinhu zvinobva kune anotungamira mhando
Yokutanga yavo, Kymera Ventus ndiyo inodhura kwazvo sarudzo, uye ndiyo yatinoona mumufananidzo wekare wechinyorwa chino. Uye kana iwe uri kushamisika kuti chii chinoramba chiri pasi penyaya yacho:
Microprocessor: Intel i3, i5 kana i7 ye8th Generation (kusarudza)
RAM ndangariro: 8 - 64 GB DDR4
Primary hard drive: 2, 120, 250 kana 500TB M.1 SSD
Sekondari hard drive: HDD kana SSD kubva 500 GB kusvika 4TB
Graphics kadhi: tinogona kusarudza Intel HD Graphics kana iyo yakatsaurirwa NVIDIA GTX 1070 uye 1080
Magetsi magetsi: 500w kana 850w.
Kana iri iyo mukoma, iyo Kymera Aqua, maficha acho anokwira notch uye ndozvinoitawo ruzivo. Mune ino kesi, kufunga kwakanyanya kwakapihwa kumitambo irikubudirira munyika yeLinux, saka chichava mufaro wevanyanyisa vatambi:
Microprocessor: Intel i7-8700K 3.7Ghz 8th Generation ine 6 epanyama uye gumi nemaviri cores, ndiko kuti, tambo gumi nembiri mukufanana
RAM ndangariro: 16 - 64 GB DDR4
Graphics kadhi: NVIDIA GeForce GTX 1080 TI (RTX 2080 TI iri kuuyawo munguva pfupi)
RefrigerationCUSTOM mvura inotonhorera iyo modding mafeni ichada ... uye ichaita kuti uropi hwako hutonhore uye iite pakunakisisa
Magetsi magetsi: YeMwaka Yekutarisa 80+ GOLD 850w.
Pachokwadi kubva kuLxA tinodzokorora iyi nhau huru, sezvo zvichikosha kwazvo kuzvipira kuedza kudivi reLinux makomputa uye Hardware ye wedzera Linux kumberi...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Slimbook inogadzira desktop yayo renji neKymera